ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - အကျီချွတ်ပေးပါ
သင့်ရဲ့ privacy ကိုအကြှနျုပျတို့အားအလွန်အရေးပါသည်. လျြောညီစှာ, ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသင်မည်သို့နားလည်ရန်အဘို့အမိန့်၌ဤပေါ်လစီတီထွင်ခဲ့ကြ, အသုံး, ဆက်သွယ်ဖို့နဲ့ထုတ်ဖော်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုအောင်. အောက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒကဖော်ပြထားပါတယ်.
•ကျွန်ုပ်တို့သည်အေပျတရားမျှတတဲ့နည်းလမ်းဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းမည်, ဘယ်မှာသင့်လျော်သော, တစ်ဦးချင်းစီစိုးရိမ်မိ၏အသိပညာသို့မဟုတ်သဘောတူညီချက်နှင့်အတူ.
•ကိုယ်ပိုင်ဒေတာအသုံးပြုခံရဖို့ဖြစ်သောများအတွက်ရည်ရွယ်ချက်မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်သင့်, နှင့်, သူတို့အားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်သောအတိုင်းအတာအထိ, တိကျမှုဖြစ်သင့်ပါတယ်, ပြည့်စုံသော, နှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်.
•ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ခိုးယူဆန့်ကျင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လုံခြုံရေးအကာအကွယ်များကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်, အဖြစ်ကောင်းစွာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်အဖြစ်, ဖွင့်လှစ်ခြင်း, ကူးယူ, အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံ.